Triveni Online - Page3of 432 - News of Nepal
यी हुन् पुरुषलाई मोहीत पार्ने चार राशी भएका युवतीहरु
व्यक्तिको जीवनमा निकै प्रभाव पारेको हुन्छ । राशी अनुसार व्यक्तिको स्वभाव चरित्र र भविष्यलाई सजिलै नियाल्न सक्ने ज्योतिष शास्त्रले बताएको छ । त्यस्तै कतिपय राशी भएका व्यक्तिहरु यस्तो हुन्छन् जसमा अन्य मानिसलाई सजिलै आर्कषण गर्न सक्ने शक्ति दिएको हुन्छ । त्यसैले आज हामी त्यस्तै शक्ति भएका केही राशीको बारेमा बताउन …
2 weeks ago	Rashifal 0
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – मन फुरुङ्ग हुनेछ । हाँकेका ताकेका काममा सफलता मिल्नेछ । विभिन्न अवसरको प्राप्ति हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ । सुन्दर पहिरनमा ठाँटिएर अरूको मन लोभ्याउन सकिने छ । मनग्ये धनलाभ हुनेछ । व्यवसायको सिलसिलामा रमाइलो यात्रा हुन सक्छ । आम्दानी …
यी हुन् सबैको प्रिय दुई राशि भएका व्यक्ति जसले गर्छन् सबैको मनमा राज ! हेर्नुहोस् ती राशिहरु !
काठमाडौँ । हिन्दु धर्ममा विश्वास गर्ने हर कोहीले राशीलाई विश्वास गर्ने गर्छन् । राशी अनुसार हरेक व्यक्तिको स्वभाव आचरण फरक फरक हुन्छ । एक मानवले गर्ने व्यवहार र अर्कोले मानवले गर्ने व्यवहार फरक हुनु स्वभाविक नै हो । यद्यपी आज हामी केही दुई राशीको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ । जुन …